Sida loo arko qiimaha Bitcoin iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'Cryptocurrencies' ee ka soo baxa terminaalka | Laga soo bilaabo Linux
Dib u eegista websaydhada kala duwan oo leh macluumaad xiiso leh oo ku saabsan bitcoin, waxaan xaqiiqsaday inay jirto tiro badan oo codsiyo ah oo noo oggolaanaya inaan ogaanno qiimaha dhirta, kala duwanaanshaha iyo u dhigmahooda, qaar badan oo ka mid ah waxaa ka mid ah suurtagalnimada in si fudud loo iibsado ama looga ganacsado cryptocurrencies. Raadinta wax u dhigma aaladahaas laakiin aan ka isticmaali karo qunsulka aan imid Coinmon, Cajiib CLI taas oo noo oggolaaneysa inaan aragno qiimaha kala duwanaanta cryptocurrencies ka raaxada konsoleheena.
1 Waa maxay Coinmon?
2 Sidee loo rakibaa Coinmon?
3 Sidee loo arkaa qiimaha Bitcoin oo leh Coinmon?
Waa maxay Coinmon?
Qalabku wuxuu u dhexeeyaa sida ugu weyn maalgashadayaasha 'Cryptocurrency', isagoo ka dhigaya dhowr barnaamijyahan inay ku biiraan mashruucii asalka ahaa si ay uga dhigaan mid xoogan oo wax ku ool ah CLI-kani wuxuu soo bandhigayaa xog mahadsanidiisa ah API coinmarketcap, kaas oo bixiya qiimaha waqtiga-dhabta ah ee noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'cryptocurrencies', kuwaas oo ay ka mid yihiin Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar iyo kuwa kale oo ka badan 1000 kriptocurrency oo hadda jira.
Sidee loo rakibaa Coinmon?
Si loo rakibo Coinmon waa inaan haysannaa Node 6.0 ama wax ka sareeya, amarrada lagu ordayo si loo buuxiyo shuruudahan Ubuntu oo lagu rakibo CLI waa kuwan soo socda:
sudo apt rakibi nodejs sudo apt rakib npm sudo npm rakib -g coinmon
Isticmaalayaasha kale waxay si toos ah ugu rakibi karaan lacagta tooska ah koodhka ilaha amarrada soo socda:
Markii la rakibo waxaan hadda ku raaxeysan karnaa korantadan weyn amarka lacagta 'ሳንቲmonmon', kaas oo qori doona qiimaha 10ka cryptocurrencies ee ugu sarreeya.
Sidee loo arkaa qiimaha Bitcoin oo leh Coinmon?
Cryptocurrency oo leh muhiimada ugu weyn iyo isticmaalka maanta waa Seeraar, si aad u aragto qiimaheeda kaliya socda coinmon, maadaama ay tahay meesha ugu horeysa ee caanka ah, laakiin waxaan sidoo kale kaliya arki karnaa btc adoo adeegsanaya coinmon -f btc.
Waxaan uga faa'iideysan karnaa Coinmon arrimo dhowr ah, sida inaan awoodno inaan ku aragno qiimaha cryptocurrencies ee lacagaha kala duwan oo aan ahayn doolarka (AUD, BRL, CAD, CHF, CLP, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, IDR, ILS, INR, JPY, KRW, MXN, MYR, NOK, NZD, PHP, PKR, PLN, RUB, SEK, SGD, THB, ISKU DAY, TWD, ZAR), tan waxaan si fudud ugu fulinnaa coinmon -c CodigoMoneda, oo lagu beddelayo CodigoMoneda oo leh koodhkeeda, tusaale ahaan, $ coinmon -c eur.
Isticmaalayaasha doonaya inay arkaan faahfaahin dheeri ah markay fiirinayaan qiimaha (gaar ahaan kuwa u heellan ganacsiga) waxay isticmaali karaan xuduudaha sare ee aaladda aan hoos ku taxnay:
2 - Qiimaha 3 - Isbeddel 1H 4 - Isbeddel 24H 5 - Beddel 7D 6 - Daboolka Suuqa
Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud, tusaale ahaan,
coinmon -C 2,4 // Wuxuu muujinayaa darajooyinka, lacagta, qiimaha iyo boqolkiiba kala duwanaanshaha 24-kii saac ee la soo dhaafay
Marka haddii aad xiiseyneyso cryptocurrencies (inaad ahaato), tani waa waxtar aad u fiican, wax ku ool ah oo ka sarreeya dhammaan qalabka degdegga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Sida loo arko qiimaha Bitcoin iyo lacagaha kale ee loo yaqaan 'Cryptocurrencies' ee ka soo baxa terminaalka
Shaqsi ahaan waxaad u isticmaashaa barnaamijkan taleefanka:
Gabi ahaanba waa qabow.
Aan aragno, maahan inaan haysto wax badan, 287 Bitshares iyo 540 GRC oo aniga qudhayduba Crunchee. Taasi waxay markaa u muuqataa inaan nahay hodan ama mala-awaal. Waqti aad u wanaagsan oo lagu iibsado Bitshares iyo EOS. Kuwa xiiseynaya.
Ma jiraa codsi u oggolaanaya tweeting otomaatig ah?
Marka waan sii wadi karaa shaqadeyda aniga oo aan ka walwalaynin tweet-ka iyo sharci-dejinta.
Kooxda Hello, waxaan rabaa inaan ku rakibo xirmadan kumbuyuutarkeyga Ubuntu laakiin waxaan helayaa qaladka soo socda
E: Xulashada xariiqda taliska "g" [de -g] oo lagu daro xulashooyinka kale macno ma samaynayso.
Ma iga caawin kartaa arintaas fadlan ..?
Haddana waan hehehehehe.
Waan ku guuleystey inaan rakibo laakiin hada markaan maamulo lacagta lacagta ah waxaan helaa fariinta soo socota.
Fadlan ma i caawin kartaa.?
Waxaad u baahan tahay inaad rakibtid nodejs
Waad salaaman tahay saaxiib, intee in le'eg ayaan doonayay inaan rakibo nodejs wuxuu ii sheegayaa inaan horay u rakibay.
xididka @ server-pc: / guriga / server # apt-get rakib nodejs
nodejs wuxuu horeyba ugujiray qaabkiisii ​​ugu dambeeyay (4.2.6 ~ dfsg-1ubuntu4.1).
Xirmooyinka hoos ku taxan si otomaatig ah ayaa loo rakibay loomana baahna.
Adeegso "apt autoremove" si aad uga saarto.
0 la cusbooneysiiyay, 0 cusub ayaa la rakibayaa, 0 si meesha looga saaro, iyo 57 oo aan la cusbooneysiin.
xididka @ server-pc: / guriga / server # coinmon
xididka @ server-pc: / guriga / server #
Ma iga caawin kartaa talo soo jeedin kale fadlan .. ??
Waxaad leedahay nodejs v4 rakibay waxaadna ubaahantahay 6 uguyaraan coinmon.
Adeegso 2 amarradan, waxay u shaqeeyaan 14.04 iyo 16.04:
sudo apt-hel rakib -y nodejs
Taas waxaad horeyba u haysatay nooca hadda jira iyo shaqooyinka lacagta ah
Ku jawaab Czech
Amarkani aniga ayuu igu tuuraa
bash: -: Faylka ama galka ma jiro
hello waxaan helayaa qalad la mid ah kan rubn uu leeyahay.
Saaxiibbo waad salaaman tihiin, diyaar baan ahay, waxaan ku arki karay qiimayaasha cryptocurrencies mashiinkayga.
kaliya waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Cd / guriga
sudo sifiican looga helo-nodejs
Waad salaaman tihiin asxaabta, habeen wacan, iska warran
Waxaan hayaa weydiin kale haddii aan doonayo inaan ogaado qiimaha loo yaqaan 'cryptocurrency', caddee sida aan u sameyn karo.
gudaha haddii aan doonayo inaan ogaado qiimaha monero.
Aad ayaan ugu fiicanahay kuwa naga mid ah ee raadinaya warar cusub oo ku saabsan dhaqaalaha maalin kasta, waxaan lacagtayda ku sameeyay sanduuqyada loo yaqaan 'cryptocurrencies' ee 2017, iyo inaan u maleynayo inaan ku sameeyay qaar amaah aan lahayn dammaanad inaan ku dalbado khadka tooska ah
Linux fowdo: Kacaan qaadista Arch